Tijaabiyeyaasha Qaabka – Tailoress The
Ma jeceshahay inaad tijaabiso qaababkeena ka hor intaan la sii deyn?
Tijaabiyeyaasha qaabku waa kuwo qiimo u leh geeddi-socodkeenna bixinta qaababka ugu fiican ee aan kari karno.
Saxiix si aad u hesho ogeysiisyada qaababka u baahan baaritaanka. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad hubiso Qaababka ay u tijaabi bogga ama guji xiriiriyeyaasha ku jira emaylka qaababka aad jeclaan lahayd inaad isku daydo oo aad noo soo dirto faahfaahinta cabbirka aad jeclaan lahayd.
Soo celinta qaabeynta iyo cusbooneysiinteeda oo bilaash ah dhammaan tijaabiyeyaasha qaabka waxaa looga baahan yahay inay soo diraan jawaab celin ku saabsan casharrada iyo qaabka iyo sidoo kale sawirrada kama dambaysta ah ee loo adeegsan karo khadka tooska ah iyo kor u qaadista qaabka. Tijaabiyeyaasha qaabku sidoo kale waxay ku raaxaystaan ​​a 10% qiimo dhimista dhammaan qaababka laga iibsaday The-Tailoress.com.
Waad ku mahadsantahay tixgelinta inaad noqoto Tijaabiyaha Qaabka, waxaad tahay qayb lagusoo dhaweynayo ee Kooxda Dawaarka!